Aleo ny vahoaka no hitsara… | NewsMada
Aleo ny vahoaka no hitsara…
Par Taratra sur 25/11/2019
Hifarana ny fampielezan-kevitra amin’ny fiatrehana izao fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna izao. Mby aiza ny fanehoana sy ny fanazavana ary ny fandresen-dahatr’ireo kandidà ny amin’ny vina sy ny fandaharanasany avy? Eo ny mpifidy mandinika, mampitaha, mitsara, misafidy…
Amin’izany, tsy takona afenina fa nisy ny fatra-panaratsy ny hafa. Tsy midika hoe tsara ny tena ny fanaratsiana ny hafa. Vokany, tsy mazava izay hatao raha voafidy eo ny mpirotsa-kofidina toy izany. Toa fanakanana ny hafa tsy ho voafidy aza no mibahan-toerana fa tsy izay handresen-dahatra ny vahoaka hifidy ny tena.
Izay tsy manan-kevitra no fatra-panaratsy ny hafa? Misy misisika amin’ny fiainana manokan’ny mpifaninana aminy… Tonga tamin’ny fomba tsy mendrika aza ny sasany: manendaka na mandoto na manindry petadrindrina, ohatra. Tsy aleo ny vahoaka no hitsara izay hampindramany fahefana?
Na izany aza, misy amin’ireo kandidà ny tena manana vina sy fandaharanasa mazava, azo tanterahina, mampandroso ny vahoaka ifotony… Mila fahavononana izany, fahasahiana, faharesen-dahatra amin’izay lazainy sy hataony amin’izany, rehefa tonga amin’ny andraikitra hampiantsorohana azy.
Iza ary aiza izay kandidà izay? Eo ny mpifidy mandinika, mampitaha, mitsara, misafidy… Andraikitra lehibe izay fa miankina amin’izay ny efa-taona fe-potoam-piasan’izay ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna voafidy eo: samy tokony handatsaham-bato fa tsy hoe ny ben’ny Tanàna ihany.
Safidy tomponandraikitra izany fa ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy. Dieny izao, mila jerena koa ny fanaraha-maso ny fanisam-bato sy ny voka-pifidianana. Tsy mifarana eo amin’ny fandatsaham-bato ny raharaha fa eo aza vao tena manomboka ny fanaraha-maso ny fampindramana fahefana.
Tsy inona fa ny tamberin’andraikitra avy amin’irao mirotsa-kofidina: tena manatanteraka izay nampanantenainy ve? Mila hasiana dikany sy omen-danja ny safidy. Dieny izao, tsy efa misy azo tsinjovina sy tsaraina ve ny amin’izany?